Izinsiza Zabahlengikazi Abanamakhono zihlala Zisengozini ku-COVID-19
Amakhethini ajwayelekile alahlwayo
Alahlwayo Mesh Amakhethini
Ikhethini nge-White Mesh
Curtain nge Integral Mesh
Amakhethini alahlwayo wezingane
Alahlwayo Curtain Hooks
Kunesidingo esikhulu sokufaka ama-SNF ngezinsizakusebenza eziningi, hhayi kuphela ngemishini yokuzivikela yomuntu siqu, kodwa nangezinsizakusebenza ezibucayi zokuvimbela ukutheleleka kanye nabasebenzi.
Kusukela kwaqala ubhadane lwe-SARS-CoV-2 / COVID-19 e-United States, sikwazile kabanzi ukuba sengozini kweziguli ezithile. Ekuqaleni, izikhungo zabahlengikazi ezinamakhono nezinye izindawo zokunakekelwa zesikhathi eside ziqale ukukhombisa ukuthambekela kokudlulisa ukutheleleka ngegciwane.
Kusuka ezinsizakalweni zokuvimbela ukutheleleka ezinqunyelwe kubantu abaningi abasengozini yesiguli futhi imvamisa abasebenzi beluleka kancane, lezi zindawo zikhombise isithembiso sokuthi lesi sifo sizobamba. Yize besazi ukuthi lokhu kuzoba yinto ebuthakathaka, bangaki abatheleleke ngokweqiniso? Ezinsukwini zokuqala zokuqubuka, ukuhlolwa kwenziwa kuphela kulabo abanezimpawu, kepha njengoba izinsiza zikhuphukile, kanjalo nokutholakala kokuhlolwa nakho. Ucwaningo olusha oluqhamuka kuCenters for Disease Control and Prevention's Morbidity and Mortality Report Weekly (MMWR) luhlolisise ukwanda kwe-COVID-19 eDetroit enamakhono okuhlengikaza (SNFs) kusukela ngoMashi kuya kuMeyi walo nyaka.
Kusetshenziswa ucwaningo lokutholakala kwamaphoyinti lapho bonke abasebenzi nezakhamizi bahlolwa ngaphandle kwezimpawu, bathole izibalo ezikhathaza kakhulu ezingamashumi amabili nesithupha ze-SNFs zaseDetroit. Ukuhlolwa kwenzeke ezikhungweni eziningi kususelwa ekubekweni kokubekwa phambili futhi kwenziwa ngokubambisana nomnyango wezempilo wedolobha. Ngaphezu kwalokho, abacwaningi benze ukuhlolwa kokutheleleka kokutheleleka okungenzeka kanye nokubonisana— “Ukuhlolwa okubili okulandelwayo kwe-IPC kwenzelwa izikhungo eziyi-12 ezibambe iqhaza ocwaningweni lwesibili futhi kwafaka nokuhlolwa kwemikhuba yokuhlangana kwabantu besebenzisa i-floorplan yesakhiwo, ukunikezwa nokusetshenziswa kwemishini yokuzivikela, isandla imikhuba yenhlanzeko, ukuhlela ukunciphisa abasebenzi, neminye imisebenzi ye-IPC. ”
Umnyango wezempilo wendawo usize ekuqoqeni ulwazi ngemiphumela emihle, isimo sezimpawu, ukulaliswa esibhedlela nokufa kwabantu. Ekugcineni, abacwaningi bathole ukuthi kusuka ngoMashi 7 kuya kuMeyi 8, 44% wezakhamizi ezingama-2,773 zaseDetroit SNF kwatholakala ukuthi zinothile ngeSARS-CoV-2 / COVID-19. Iminyaka ephakathi nendawo yalabo bahlali abahle kwaba yiminyaka engama-72 kwathi u-37% wagcina ngokudinga ukulaliswa esibhedlela. Ngeshwa, bangu-24% labo abathole betholile, bathola ukufa. Ababhali baqaphele ukuthi “Phakathi kweziguli ezingama-566 ze-COVID-19 ezibike izimpawu, ezingama-227 (40%) zashona zingakapheli izinsuku ezingama-21 zokuhlolwa, uma kuqhathaniswa nama-25 (5%) ezigulini ezingama-461 ezingabikanga zimpawu; Kushone abangu-35 (19%) ezigulini eziyi-180 isimo sazo esingaziwa ukuthi singaziphi izimpawu. ”
Ezikhungweni eziyi-12 ezibambe iqhaza ocwaningweni lokutholakala kwamaphuzu wesibili, eziyisishiyagalombili beziphoqelele ukuqoqwa kweziguli ezinempilo ezindaweni ezinikezelwe ngaphambi kocwaningo. Iningi lezikhungo zinokubalwa kwabantu kweziguli ezingaba ngu-80 kanti kulezo ezivivinywe ngesikhathi kwenziwa ucwaningo lwesibili, u-18% ube nemiphumela emihle kanti bekungaziwa ukuthi unawo. Njengoba ababhali bephawula, lolu cwaningo lukhomba ukuba sengozini kwalesi siguli nesilinganiso esiphakeme sokuhlaselwa. Ngaphesheya kwalawo ma-SNF angama-26, kube nesilinganiso sokuhlaselwa jikelele esingu-44% nesilinganiso sokulaliswa esibhedlela esihlobene ne-COVID-19 yama-37%. Lezi zinombolo ziyashaqisa futhi zikhomba isidingo esiqhubekayo sokutholwa kusenesikhathi, imizamo yokuvimbela ukutheleleka, ukuhlangana, nokusebenzisana neminyango yezempilo yomphakathi. Kunesidingo esikhulu sokufaka ama-SNF ngezinsizakusebenza eziningi, hhayi kuphela ngemishini yokuzivikela yomuntu siqu, kodwa nangezinsizakusebenza ezibucayi zokuvimbela ukutheleleka kanye nabasebenzi. Njengoba lezi kuyizindawo ezisengcupheni, ukusekelwa okuqhubekayo kuzodingeka hhayi kuphela isikhathi sobhadane kodwa nangemva kwalokho.
Isikhathi Iposi: Jun-03-2020
Ikheli: Indawo yezimboni yaseQiushe, Idolobha laseTongli, iWujiang, iSuzhou, isifundazwe saseJiangsu
© Copyright - 2008-2020 Suzhou Tianfeng Environmental Material Wonke Amalungelo Agodliwe.